Home Wararka Maxbuus ka baxsaday xabsiga magaalada Qardho
Maxbuus ka baxsaday xabsiga magaalada Qardho
Sida uu sheegay Afhayeenka Ciidanka Asluubta DG Puntland Gaashaanle Cabdirisaaq Maxamuud in maxbuus lagu magacaabo Axmed Cabdi Jaamac oo ku xukuman Dil Toogasho ah uu ka baxsaday xabsiga magaalada Qardho.
Warka ayaa waxa uu intaas ku darayayaa in Maxbuuskaan oo xannuunsaday uu u baahday daryeel Caafimaad oo ka baxsan Xabsiga Magaalada Qardha, markii Ciidanka Asluubta ay qaadeen waxaa u suuragashay in uu baxsado.
Afhayeenka ayaa qaabka baxsiga maxbuuska ku tilmaamay shirqool ay wax ka ogaayeen saraakiishii iyo ciidankii Asluubta ee loo xilsaaray in ay soo daweeyaan Maxbuuska si dib loogu soo celiyo Xabsiga Qardho.
“Xukumane Axmed Cabdi Jaamac oo u xirnaa dil toogasho ah ayaa arrimo caafimaad loogu qaaday Isbitaalka guud si loo daweeyo, saraakiil ayaa loo xilsaaray howshaas balse way la garab mareen oo afka ayay la galeen ciidan hubeysan oo u diyaarsanaa, markii aan baaris dheer sameynay waxaa inoo caddaatay in dayacaad la sameeyay”ayuu yiri Afhayeenka.
“Waxaa dhici karto in qaarkood ay xiriir la leeyihiin Raggaas hubeysnaa, waxaa maqan mid kamid ah ciidankii waday Maxbuuska balse waxaa xiran saraakiishii mas’uulka looga dhigay in ay isbitaalka geeyaan xukmanaha dibna ugu soo celiyaan Xabsiga ” ayaa sii raaciyay Afhayeenka Ciidanka Asluubta DG Puntland.
Madaxweyne Siciid Deni waxa uu Maarso 2021 sheegay in aad loo adkeynayo Xabsiyada & Maxaabiista u xiran kiisaska kala duwan kadib markii Al-Shabaab weerartay Xabsiga Magaalada Boosaaso oo ay kasii deysay Rag ka xirnaa.